Flights from Budapest to Rome, Milan, Basel and Malmo resume | Airport news
Ikhaya » izithuba » Iindaba zesikhululo senqwelomoya » Iindiza ezisuka eBudapest zisiya eRoma, eMilan, eBasel naseMalmo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuhamba zaseYurophu • IHungary iindaba zokuhamba • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Iindaba zokuhamba e-Itali • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Sweden iindaba zokuhamba • Switzerland iindaba zokuhamba • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
Iindiza ezisuka eBudapest zisiya eRoma, eMilan, eBasel naseMalmo
Ukwamkela ukubuya konxibelelwano kwizixeko zaseBasel, Malmo, Milan naseRoma, uWizz Air ukuqinisekisile ukuphinda kuziswe ezinye izihlalo zeveki ze1,440 ekuqaleni kukaJuni.
Ukukhutshwa kokugonywa eHungary ngoku yenye yezona zinto zibalaseleyo phakathi kwamazwe e-EU
I-Wizz Air iqinisekisile ukonyuka ukuya kwizihlalo ezingama-3,420 ngeveki kwiindawo ekufikelelwa kuzo ngoku
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest sikubeka phambili ukubuya kwezithuthi zabahambi kwinqanaba elikhuselekileyo nelizinzileyo
Kule veki Isikhululo senqwelomoya saseBudapest kuvulwe kwakhona iindlela ezine ezibalulekileyo ngesiphatho esisekwe ekhaya Wizz Air. Ukwamkela ukubuya kwamakhonkco kwizixeko zaseBasel, eMalmo, eMilan naseRoma, umphathi ophethe ngexabiso eliphantsi uqinisekisile ukuphinda kuziswe ezinye izihlalo ze-1,440 ngeveki ekuqaleni kukaJuni. Sele isethwe ngaphezulu kokuphindwe kabini ngoJulayi, umphathisi-mthwalo uqinisekisile ukwanda ukuya kwizitulo ezingama-3,420 ngeveki kwiindawo zokugqibela ezibuyela kwinethiwekhi yesikhululo seenqwelomoya.
“I-Wizz Air ibuyise iindawo ezifanelekileyo kuzo zombini abakhweli nezokuzonwabisa abakhweli ngokufanayo- iBasel, ikomkhulu lenkcubeko laseSwitzerland; Malmo, isixeko esimangalisayo esiselunxwemeni eSweden; IMilan, ikomkhulu lehlabathi lefashoni kunye noyilo; kunye neRoma, isixeko esidumileyo sase-Itali. Zonke izixeko ezikhulu ezivuya kakhulu kukuzibona zibuyela kucwangciso lwethu lweveki, ”utshilo uBalázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, Isikhululo senqwelomoya saseBudapest. “Ukuqhubela phambili nokufumana amava ngokutsha, iBudapest ibeka phambili ukubuya kwezithuthi zabakhweli kwinqanaba elikhuselekileyo nelizinzileyo. Ngoncedo lwamaqabane ethu kwinqwelo-moya, siyakwazi ukubona ukuphuculwa kwesikhululo seenqwelomoya kunye nokwamkela iindwendwe ezibuyayo ukwenza ukuba ukhenketho lwaseHungary lubuye, ”wongeza uBogáts.
Ngelixa iinkonzo eMalmo ziya kuhlala njengeenqwelo moya eziphindwe kabini-ngeveki, ngoJulayi iWizz Air yokuya rhoqo eBasel iya kuba kahlanu ngeveki. Nge-Agasti, ukusebenza kweenqwelomoya eMilan Malpensa kuya kuba kukuhamba rhoqo kwemihla ngemihla kwaye iRoma iya kunyuka kancinci ukuya kumaxesha amahlanu ngeveki.
"Ukukhutshwa kokugonywa eHungary kungoku nje yenye yezona zibalaseleyo phakathi kwamazwe e-EU, ngokunxulumene nabemi," ucacisa uBogáts. "Ngaphezu kwesiqingatha selizwe sele silufumene ugonyo, siqinisekile ukuba indlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo iya kuqhubeka kwaye isikhululo sethu seenqwelomoya siza kuphinda sibe negalelo eliphambili kuphuhliso lwezokhenketho eHungary."